आँट भएका महिला मन पर्छ : अर्चना थापा - अन्तर्वार्ता - नारी
आँट भएका महिला मन पर्छ : अर्चना थापा
संस्थापक–अक्षर क्रियसन तथा लेखक
तपाईंलाई मन परेको टप–थ्रि पुस्तक ?
भर्जिनिया उल्फको अ रुम अफ वान्स वन, अरुणधति रोयको गड अफ स्मल थिंक्स, बेन ओकरीको द फ्यामिस्ड रोड ।
पहिलो पुस्तक जसले तपाईंलाई अत्यन्तै भावुक बनाएर आँखाबाट आँसु झार्‍यो ?
पर्ल बकको द गुड अर्थ ।
तपाईं आफ्नो मौलिक लेखनमा अडिग रहनुहुन्छ वा पाठकको चाहनाअनुसार चल्नुहुन्छ ?
म दुईथरीका लेख लेख्छु । क्रियटिभ राइटिङका लागि म आफ्नो मौलिक विचार, शैली तथा विषयवस्तु आफ्नो रुचिअनुसार रोज्छु तर मेरा लेख तथा समालोचनाहरू समसामयिक सामाजिक विषय एवं मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन्छन् ।
लेखिकाका नाताले तपाईंले खर्चिएको उपलब्धिमूलक पैसा ?
सबैभन्दा पहिलो त मेरा लागि समय नै महत्वपूर्ण धन हो । म जति पनि पुस्तक किन्छु अथवा ल्यापटप वा विभिन्न देश–विदेश जाँदा, सभा–सेमिनारहरूमा सहभागी हुँदा जे–जति खर्च हुन्छ ती सबै मेरा लागि उपलब्धिमूलक छन् ।
तपाईंका अप्रकाशित र अधूरा पुस्तक ?
एउटा कृतिमा काम गरिरहेकी छु । अर्को एउटा कविता संग्रह अंग्रेजी भाषामा छ जुन लामो समयदेखि त्यत्तिकै थाती राखेकी छु ।
तपाईंका लागि जीवनको वास्तविक सफलता के हो ?
सफलताको एउटै मात्र सूत्र हुँदैन । आफ्नो कृतिलाई शतप्रतिशत दिन सकें भने मेरो वास्तविक सफलता ठहरिनेछ ।
महिला लेखिकाका रूपमा पुरुष पात्रका सम्बन्धमा लेख्नु कत्तिको सहज हुन्छ ?
मेरो कठपुतला कथा संग्रहका केही पात्र पुरुष नै छन् । पुरुष पात्रलाई चित्रण गर्दा मलाई सहजै लाग्यो ।
तपाईंले आफ्ना खुसी वा दुःख आफ्ना पुस्तकका पात्रमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ ?
प्रत्यक्ष रूपमा त छैन तर केही अंश स्वतः आइहाल्छ लेखनमा । भावना, अनुभूति, भोगाइ पात्रहरूमार्फत आउँछन् नै त्यसलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन ।
तपाईं आफूले आफैलाई गुगलमा खोज्नुहुन्छ ?
कहिल्यै खोज्दिन । मलाई डर लाग्छ किनभने अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा र आफैंले लेखेका कुरा पनि कहिलेकाहीँ आफैंलाई चित्त बुझ्दैन ।
फिक्सनमा तपाईंको फेभरेट हिरो ?
विभिन्न समयमा विभिन्न हिरो फेभरेट रहे । म कुनै एउटाको मात्र नाम लिन चाहन्न ।
तपाईंको सबैभन्दा ठूलो त्रास के हो ?
म सर्पसँग डराउँछु । सर्प देख्दा आङ जिरिङ्ग हुन्छ ।
महिलामा भएको कुन क्वालिटीको खुलेर प्रशंसा गर्न मन लाग्छ ?
स्पष्टवक्ता तथा जे–जस्तो काम पनि गर्न सक्छु भन्ने सकारात्मक सोंच र आँट भएका महिला मन
पर्छन् मलाई ।
जेष्ठ ९, २०७६ - हलिउड एक्टर टम ह्यान्ससँग स्किन सेयर गर्न मन छ
जेष्ठ ३, २०७६ - स्टेरिङमा साउदी महिला
वैशाख ३१, २०७६ - मञ्जुको मनको साथी
वैशाख २६, २०७६ - बुढेसकालमा किन अनुहार मुजा पर्छ ?
वैशाख १८, २०७६ - म आफै फेसन क्रियट गर्न चाहन्छु
थप केही अन्तर्वार्ताबाट
हलिउड एक्टर टम ह्यान्ससँग स्किन सेयर गर्न मन छ जेष्ठ ९, २०७६
उपचारले बाथ रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जेष्ठ ७, २०७६
म आफै फेसन क्रियट गर्न चाहन्छु वैशाख १८, २०७६
उपत्यकाको धूलो–धूवाँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ : इच्छा कार्की वैशाख ४, २०७६
बालबालिकाहरूको अवस्था र समस्या चैत्र २७, २०७५
झर्ने आसुँ अरुलाई देखाएर के फाईदा ? चैत्र १९, २०७५